February 19, 2021 – မြန်မာသတင်းစုံ
အခန်းထဲမှာ လူတစ်ယောက် ရောက်နေတယ်ဆိုတာ ဦးဘသော် သိတယ်။ သိမှာပေါ့ အသံတွေ ထွက်နေတာကိုး။ ယာဉ်မောင်းမောင်စိုးသိုက် ရဲ့ အိမ်ခန်းဆောင်လေးထဲက ထွက်နေတာ မနီလာ အသံမှန်းလည်း သိတယ်။ “မမ ကို လိုးပါ မောင်ရယ်။ ကြမ်းကြမ်းလေးနော်။ အား အား ရှီး ရှီး” ဦးဘသော် ရင်တွေ တဒိတ်ဒိတ်ခုန်လာခဲ့တယ်။ သူသိတာက သူ ဒါကို အရမ်း ကြည့်ချင်တာပဲ။ အသံလေး ကြားနေတာနဲ့ တင် တော်တော်စိတ်တွေ တမျိုးဖြစ်လာတာကိုး။ မဖြစ်ဘူး သူဒါကို မြင်ရမှကို ဖြစ်မယ်။ မောင်စိုးသိုက် ရဲ့ အိမ်ခန်းဆောင်လေးပေါ် မတက်တော့ဘဲ ဘေးကနေ ပတ်သွားလိုက်တယ်။ အသံမထွက်အောင် အသာလေး နင်းပြီး ခေါင်းရင်းကို သွားလိုက်တယ်။ ပြတင်းပိတ်ထားတယ်။ အထဲက လိုက်ကာ […]
Posted on February 19, 2021 Author admin	Comments Off on အားပါးတရပါရှင်
လင်းလင်းထွေးတဲ့ လင်းထွေးက စာသိပ်ညံ့တာ လင်းက စာမရဘူးလေ ရှိတဲ့လူ နှစ်ဆယ် ကျော်တည်းမှာ အညံ့ဆုံး ကျောင်းရောက်ရင်အားရင် ဘော်လီဘောကစား စာဖတ်ချိန်ရောက်တော့ ငိုက်ရော ငိုက်တဲ့ချိန် စာမရတဲ့ချိန်ဆို ဆာမက ထိုင်ထ ငါးဆယ် လောက်လုပ်ခိုင်းတာ အဲ့အချိန်တွေဆို လင်းကအိမ်နေရင်း ဘော်လီ သိပ်မဝတ်သေးတော့ နို့ နှစ် လုံးက မလှုပ်ဘဲနဲ့ ကိုလှုပ်နေတာ အဲချိန်တေဆို ကိုနိုင်က မျက်လုံးကြွပ်မတတ်ကြည့်တာ။ လင်းကအပျိုစစ်လို့ပြောရင်ရမယ်ထင်တယ်နော် ကိုး တန်းလောက်တုန်း က ဘဲတစ်ဘွေ ထားပါတယ် ချိန်းတွေ့တော့ အပေါ်ပိုင်းကိုတိုက်စစ်ဆင်တာ ပေးပါတယ် ဘာဖစ်တာမှတ်လို့ ကြာတော့အောက်ပိုင်းပါရန်မူလာတယ် ကိုင်တာစမ်းတာ လုပ်လာတယ် ဒါနဲ့ ကိုး တန်းနဲ့ ဗိုက်ကြီး တယ်လို့ နာမည်မထွက်ခြင်တာနဲ့ဖြတ်လိုက်ရတာပေါ့ အစတုန်းကတော့ဗျာအေးဆေးဘဲ မျက်စိအစာကြွေး လိုက် ကျောင်းသားတွေ ကျောင်းသွားပီဆို […]
Posted on February 19, 2021 Author admin	Comments Off on တပည့်မလေး
အသက် ငါးဆယ် မုဆိုးဖို ဦးခင်မောင်။မန္တလေး ရန်ကုန် ဟိုက်ဝေးကားစီးပြီး ရန်ကုန်သွားနေပါသည်။ အသက်လေးရ သားသမီးတွေလည်း အိမ်ထောင်တွေနဲ့ ခွဲကုန်ကြပြီ။တကိုယ်တည်း ငြီးငွေ့လှ၍ရန်ကုန်ကညီကျောင်းမှာဘုန်းကြီးဝတ်ဘို့ ဖြစ်သည်။ တ ရိပ် ရိပ် ပြေးနေ သောကား က တ နေရာရပ်သည်။ အသက်နှစ်ဆယ့်ငါးနှစ် ခန့် ကောင် မ လေးတယောက်တက်လာကာ သူ့ ဘေးက ခုံမှာဝင်ထိုင်၏။ ကောင် မ လေးတင် ပါးက သူ့ ပေါင် ကို အိကနဲလာအထိ ထိတ်ကနဲ ရင် ခုန်မိ၏။ ဒါပေမဲ့ အရွယ်က ကွာသည်မို့ စိတ်ကို ဘေးလွှင့်ထားလိုက်ရသည်။ ခဏကြာတော့ စကားစမြည်ပြောရင်း ထိုကလေးမသည် အညာသူ ။ ရန်ကုန်သားနှင့် အိမ်ထောင် ကျ။ သမီးလေးတ ယောက် […]
Posted on February 19, 2021 Author admin	Comments Off on ငတ်နေခဲ့တာကြာပြီ
တစ်နေ့တော့ ညနေစာ စားပြီး ပျင်းတာနဲ့ ကျုပ် ရွာထဲ လျှောက်လာခဲ့တယ်..။ အချိန်က မှောင်ရီပျိုးနေတဲ့အချိန် …တစ်နေရာ အရောက်မှာ …. ထွန်းတင်….နင် ဘယ်သွားမလို့တုန်း……. ကျုပ်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ကျုပ်သူငယ်ချင်း မိအေးဆိုတဲ့ ကောင်မပေါ့..။ သူက ခြံဝမှာ ရပ်နေတယ်..။ ကျုပ်တို့ရွာက ရွာကြီး….အိမ်တိုင်းနီးပါး ခြံနဲ့ ဝန်းနဲ့ နေကြတာ…။ ငါလဲ….ပျင်းတာနဲ့ ထွက်လာတာဟ…… ဒါဆို…အိမ်ထဲဝင်အုန်းဟာ…..ငါပြောစရာရှိလို့…. အေး……. ကျုပ်လဲ ခြံထဲကို မိအေး နောက်ကနေ ဝင်လိုက်သွားတယ်..။ ကျုပ်က လူပျိုဖြစ်နေပြီဆိုတော့ ရှေ့က သွားတဲ့ မိအေးကို နောက်ကနေ ကြည့်မိတယ်..။ သူ့တင်ပါးကြီးတွေက အိပက် အိပဲ့ နဲ့ အသည်းယားစရာကြီး…..ဟီး ဟီး…..။ သူ့တင်ပါးကြီးတွေ လှုပ်နေတာ ကြည့်ပြီး ကျုပ်စိတ်ထဲမှာ တစ်မျိုးကြီးဗျာ…..။ လာ ထိုင်…..ထွန်းတင်….. […]
ကျွန်တော် ကိုမောင်မောင်ကို အတော်မကျေမနပ်ဖြစ်မိတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ….ကျွန်တော့်ပိုင်နက်ထဲက အစာကို လက်ရဲ ဇက်ရဲနဲ့ မခန့်လေးစား လုယူခဲ့တာကိုး။ ဒါကတော့….မဖြစ်သင့်ဘူး….။ သူဘယ်လောက် ချမ်းသာချမ်းသာ… ကျွန်တော့်ထက် ဘယ်လောက်ဘဲ အဆင့်မြင့်မြင့်ပေါ့။ အခုတော့….ကျွန်တော့်မှာ နေရခက်….တွေးရခက်နဲ့ သူပေးထားတဲ့ လခကလဲ မနည်းဘူးလေ။ နောက်ပြီး ဆိုင်တစ်ခုလုံးမှာ ကျွန်တော် အခွင့်အရေးအရဆုံးပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ကို စော်ကား ခဲ့တယ်။ စောက်ဂရုစိုက်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ အထာကို ပြခဲ့တယ်။ ” အင်း….ကိုမောင်မောင် ခင်ဗျား ကျွန်တော်နဲ့ တွေ့တော့မယ်….တောက်….” ကြိတ်မနိုင်ခဲမရကျိန်းဝါးခါ ခေါင်းလည်းများလှပြီ ဒါပေမယ့် သူမကြားဘူး။ သူ့ရှေ့မှာတော့ ခပ်တည်တည်ပဲပေါ့။ ငွေကြောင့်လား။ မန္တလေးမှာ ရည်းစားနဲ့ ပြဿနာတက်လို့ ရန်ကုန်ပြေးခဲ့တယ်။ အခုရန်ကုန်မှာ လူသတ်မှုဖြစ်ပြီး ထောင်ထဲ ဝင်ရတော့မလားပဲ၊ ငွေဂုဏ်၊ ကြေးဂုဏ်၊ ရာထူးဂုဏ် ပြည့်တဲ့ […]
Posted on February 19, 2021 Author admin	Comments Off on စွဲနေလေတော့သည်
Posted on February 19, 2021 Author admin	Comments Off on ညီမလည်းစိတ်ပါတယ်
Posted on February 19, 2021 Author admin	Comments Off on ပါကင်ဖောက်တယ်ဆိုတာ
Posted on February 19, 2021 Author admin	Comments Off on ဖော်မပြနိုင်သောအရသာ